Tsy misy vaksiny na fanalavirana ara-tsosialy: tsimatimanota COVID Herd tratra eto
Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Tsy misy vaksiny na fanalavirana ara-tsosialy: tsimatimanota COVID Herd tratra eto
Aza adino ny manalavitra ny fiaraha-monina sy ny vaksininy. Ny vondrom-piarahamonina herd dia fomba iray hanafoanana ny COVID-19. Ny teôria dia voan'ny virus ny olona rehetra ary mijanona ho voaro aorian'ny aretina. 93% no voa teto amin'ity fanjakan'i Etazonia ity, izay voalohany eto an-tany sy Etazonia.
Lancaster County any amin'ny State of Pennsylvania dia nanjary ny 'voalohany nahatratrarana herisetra andiany tamin'ny COVID-19.
Ny Amish Community any Pennsylvania dia tsy nanana lalàna manalavitra ny fiaraha-monina na fitsipika hafa nandritra ny pendemika.
90% ny tokantrano no voan'ny virus rehefa nanohy ny fotoam-pivavahana tany am-piandohan'ny lohataona lasa teo
The Amish dia vondron'olona mpiara-miasa am-piangonana Kristiana nentim-paharazana miaraka amin'ny fiaviany Alemanina Swiss sy Alsatian Anabaptist. Izy ireo dia mifandray akaiky amin'ny fiangonana Mennonite. Ny Amish dia fantatra amin'ny fiainana tsotra, fitafiana tsotra, pasifisme kristiana, ary tsy fahaleovan-tena hampiasa haitao maro amin'ny haitao maoderina, miaraka amin'ny tanjona tsy hanelingelina ny fotoam-pianakaviana, na hanolo resaka ifanaovana raha azo atao.
Ity vondrom-piarahamonina Amish any Pennsylvania, Etazonia ity dia nahavita fiarovan-tena tamin'ny COVID-19 ′ taorian'ny 90 isan-jaton'ny ankohonany no voan'ny virus rehefa nanamaivana ny lalàna momba ny fanalavirana ara-tsosialy.
Ny mpitantana foibem-pitsaboana ao am-pon'ny vondrom-piarahamonina Amish any New Holland Borough dia manombana hatramin'ny 90 isan-jaton'ny fianakaviana Plain hatrizay dia voan'ny aretina iray farafaharatsiny, ary nahatratra izay tsy mbola nisy vondrom-piarahamonina hafa teto amin'ny firenena : Herisetra amin'ny Herd.
Ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka sy ny epidemiolojista dia tsy niady hevitra momba ny fihanaky ny aretina pesta izay nambaran'i Hoover. Saingy nilaza ny ahiahiny izy ireo fa ny fiheverana diso ny tsy fananan-kery amin'ny vahoaka izay mandrafitra ny 8 isan-jaton'ny County Lancaster dia mety hanimba ny ezaka hamadihana ny onjan'ilay areti-mandringana.
Tsy fantatra na hahomby amin'ny fiarovana ny herin'ny herintaona ny taona lasa.
Ny manam-pahaizana momba ny areti-mifindra sasany dia tsy te hiantehitra amin'ny fiarovana ny andian'ondry. Raha ny filazan'ny mpahay siansa sasany dia mety misy fiarovana voafetra ny areti-mifindra taloha sy ny antibodies misy.
Ny mpikambana iray ao amin'ny fiarahamonina Amish dia nanaiky fa ny sarontava tarehy sy ny halaviran'ny fiaraha-monina dia nanakiana mafy ny fanalefahana ny fiparitahan'ny COVID-19. Manao saron-tava izy rehefa mifanerasera amin'ny tsy Amish. Saingy fantany ihany koa fa maro amin'ny vondron'olona Plain no tsy mandray fepetra mitovy amin'izany.
'Amin'ny ankapobeny, izahay dia te hanaja ireo manodidina anay,' hoy ny mpiandraikitra ny fitsaboana eo an-toerana nandritra ny 17 taona. Andriamatoa Hoover. Noho ny fahatsapana tsimatimanota, hoy i Hoover, ny fiarahamonina Plain dia mino fa ny torolàlana momba ny fahasalamam-bahoaka dia tsy 'mihatra aminay.'
Fomba fijerin'i Hoover fa tsy mizara.
Ny vondron'olona Plain any Lancaster County, izay misy ny Amish sy Mennonites, dia tsy misy dikany. Raha atambatra, dia maneho ny 8% amin'ny mponina ao amin'ny distrika misy mponina mihoatra ny 545,000, araka ny vinavinan'ny Elizabethtown College's Young Center for Anabaptist and Pietist Studies.
Amin'ny toe-javatra mety, ny olona iray voa dia mety hiteraka valanaretina, hoy i Hoover.
Raiso ny zava-nitranga tao Disneyland.
Roa am-polony taona lasa izay, nambara fa nopotehina tany Etazonia ny kitrotro noho ny fampielezana vaksinim-pirenena mahomby. Saingy tsy nanakana ny fihanaky ny aretina 150 ny olona tao amin'ny fanjakana fito, Mexico sy Kanada tamin'ny 2014, hoy ny Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ankizy tsy voamarina no nahatonga ny valan'aretina.
Ny dikan'izany dia izao: raha misy fihanaky ny areti-mifindra mahery vaika izay misy vaksinina voaporofo fa mety hitranga ao amin'ny Toerana Sambatra indrindra eto an-tany, dia mety hitranga any Lancaster County izany.
Ny valanaretina eo amin'ny Lemak dia hisy fiatraikany amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika satria na dia misaraka aza ireo antokom-pinoana ireo dia tsy mitoka-monina izy ireo. Ny Plain dia mifangaro amin'ny Anglisy, rehefa miresaka amin'ireo mpifanolobodirindrina Amish tsy Amish izy ireo, any amin'ny magazay fivarotana enta-mavesatra, ny toeram-pivarotan-dry zareo ary ny toeram-bahoaka.
Mety mbola mora ny paosin'ny vondron'olona (Plain) izay tsy voan'ny aretina, ary raha voan'ny aretina izy ireo, dia atahorana hisy ny pesta.
Ny sidina voalohany nataon'i Aeroflot dia tonga any Seychelles
Nihidy ny kapiteny amerikana: polisy 1 maty, 1 naratra, maty maty